Tsy misy ny fambolena raha tsy misy famatsiam-bola avy amin'ny governemanta - Potatoes News
Tsy misy ny fambolena raha tsy misy famatsiam-bolan'ny governemanta
Ireo orinasam-pambolena holandey dia manana fidirana tsara amin'ny famatsiam-bolan'ny governemanta. 2 ka hatramin'ny 7 isanjaton'ny fitakiana famatsiam-bola ihany no tsy voavaly, izay ambany lavitra noho ny an'ny ankamaroan'ny firenena eropeana hafa. Ny minisitra Schouten dia nanoratra izany tamina taratasy ho an'ny trano ambany. Ny filàna ara-bola tsy misy ilana azy dia antony iray lehibe ahazoana vola sy fifindrana amin'ny fambolena maharitra. Tsy maintsy manampy eto ny governemanta.
Mikasika ny toerana famatsiam-bola holandey, ny minisitra dia naka teny avy tamin'ny tatitra eropeana dimy ambin'ny roapolo, izay nandinihana ny famatsiam-bola amin'ny fambolena any amin'ireo firenena mpikambana isan-karazany, ary avy amin'ny fandinihana Wageningen ny toe-bolan'ny orinasam-pambolena holandey.
Fividianana sy faharetana
Ny fividianana tavoahangy fitadiavam-bola dia mifandraika indrindra amin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa sy ny fanaovana dingana mankany amin'ny faharetana. Nanjary sarotra kokoa ny fahazoana azy satria nitombo ny sandan'ny orinasa ary matetika dia tsy manana fitoviana ny mpividy. Voavaha matetika izany ao anatin'ny toe-javatra misy ny fianakaviana, saingy sarotra ho an'ny olona avy any ivelany ny manomboka toeram-pambolena.
famatsiam-bolan'ny governemanta ho an'ny toeram-piompiana
Somary tsara ny toe-draharaha ho an'ireo orinasa holandey, hoy ny famin'ny minisitra. Tsy misy sakana lehibe ho an'ny tantsaha handefa fangatahana famatsiam-bola any amin'ny bankiny. Saingy miaraka amin'izay dia nitombo ny renivohitry ny orinasa; ny fandinihana WEcR dia nampiseho fa ny salan'isan'ny kapitalin'ny orinasa iray dia nitombo hatramin'ny 1.5 tapitrisa Euros tamin'ny taona 2001 ka lasa 3.5 tapitrisa euro tamin'ny taona 2018. Tamin'ity fitomboana ity dia saika nitombo avo roa heny ny isan'ny indram-bola arahin'antoka amin'ny banky; fa tamin'ny taona 2001 dia mbola manana trosa 18 miliara EUR 33 amin'ny sehatry ny fambolena ny banky, XNUMX XNUMX tapitrisa EUR izany roa taona lasa izay. Ny fiampangana zanabola amin'ity renivola indram-bola ity dia nianjera tao anatin'ny taona vitsy lasa, na izany aza, noho ny tahan'ny zana-bola ambany.
Ireo orinasa te-hifindra amin'ny fomba fambolena maharitra kokoa dia mety ho sarotra ihany matetika ny mahita famatsiam-bola hanaovana ny fandaniana ilaina. Hitan'ny banky fa mampidi-doza ny famatsiam-bola ity switch ity ary, taorian'ny krizy nindramina tao anatin'ny folo taona lasa, dia lasa malina kokoa amin'ny fampindram-bola amin'ireo tetikasa mety hampidi-doza. Ankoatr'izay, ao anatin'ny taona vitsivitsy, ny banky manerantany dia manaiky na dia ny torolàlana henjana kokoa aza (ny torolàlana Basel IV), izay manery azy ireo hanao fefy ara-bola mety hampidi-doza kokoa - ary izany dia mazàna midika fa kely kokoa no nindramin'izy ireo.
Ny Minisitra Schouten dia namintina fa ny andraikitra amin'ny governemanta dia ny famenoana ireo banga ireo. Vita izany, ankoatry ny zavatra hafa, ny Vermogens Versterkend Krediet, izay efa nisy nanomboka tamin'ity taona ity ary manohana ny mpividy sy ny fanombohana, ary miaraka amin'ny tahirim-bola ho an'ny kapitaly mitaky risika, izay mikendry ireo mpandraharaha te hiova fo.
…. Iray amin'ireo hevitra:
famatsiam-bolan'ny governemanta 0,7%
News / Toe-karena /
Tags: indostrian'ny fambolenatantsahasehatry ny ovy
Ny fanondranana ovy voa any ampitan-dranomasina dia misy ampahany azo sitrana
Karazan-tsakafo Maine Potato vaovao, ny Caribbeanou Russet, no mahita laza mitombo